Daawada budada ah (94-07-5) hplc = 98% | Nacnac AASraw Fat Tukasho
/ Products / Xabbad dufan leh / Budada 'Synephrine'
Rating: SKU: 94-07-5. Category: Xabbad dufan leh
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saarka iyo awooda wax soo saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ee budada Synephrine (94-07-5), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Fiidiyowga sawirrada "emephrine"
Raw Synephrine Calaamadaha aasaasiga ah
Qaaciddada Molecular: C9H13NO2
Miisaanka kelli: 167.21
Dhibcaha Biyaha: 187 ° C
Root Synephrine budada ee wareegga steroids
Budada loo yaqaan 'Synephrine powder' waa mid dabiici ah oo qarsoodi ah oo loo yaqaan 'alkaloid' kaas oo loo arko inuu yahay kicin iyo nootropic sababtoo ah waxay saameyn ku leedahay miisaanka oo yaraada iyo hababka garashada maskaxda. Caadi ahaan budada Synephrine waxaa laga helaa dhirta iyo xayawaanka qaarkood, gaar ahaan inta badan budada Synephrine ee laga helo kaabayaasha cuntada waa laga soosaaray lagana soosaaray Citrus Aurantium Plant oo inta badan loo yaqaan 'Bitter Orange extract'.
Isticmaalka budada loo adeegsado budada ah
Si looga faa'iideysto astaamaha dheef-shiid kiimikaadka iyo tamarta ee budada Synephrine, waxaa ugu wanaagsan in la qaato waxa ugu horreeya subaxnimada ama 15 - 30 daqiiqo kahor jimicsiga. Tababbarka kahor iyo nafaqada luminta dufanka ay kujiraan budada Synephrine waa in lagu qaataa biyo kahor jimicsiga. Qiyaasta ugu waxtarka badan waa 15 - 25 milligram halkii marba.
Waa Maxay Noocyada Natiijooyinka Waa inaan ka Fiiriyaa budada soodhada ah ee Rawsha
Sida dhammaan waxyaaba dabiiciga ah, ha ku dhejinin filashooyinka aan fiicnayn ee sareeya ee budada loo yaqaan 'Synephrine budada'.
Xasuuso in dheef-celinadu aysan dhisi karin jimicsi weyn. Dhiirigelinta tababarka saxda ah iyo nafaqada.
Taasi waxay tidhi, halkan waxaad ka filan kartaa kaabisashada budada ah ee "Synephrine":
Hoos u dhac aad u yar oo ah heerka dheef-shiid kiimikaad hoose.
Hoos u dhac yar oo ka yimaada waxqabadka ka mid ah qaboojiyeyaasha unugyada baruurta ee ka hortagga abaaraha.
Waxoogaa kor u kaca saameynaha cimilada ee cuntada, ama 'kharashka tamarta' ee cuntooyinka dheef-shiidka.
Haddii taasi aysan ku dhajin dhammaan jacaylka adiga, waan fahmayaa. Waxaan kaliya ku baaqayaa sida ay tahay.
Taasi waxay tiri, macnaheedu maaha inaadan ku dhejinaynin syneprine. Taas macnaheedu waa inaadan waxba ka dhihin kiniinada "Synephrine" haddii aad rabto inaad aragto hagaajin.
Isla sidaas oo kale ayaa lagu sheegi karaa waxyaabaha dheeraadka ah ee dabiiciga ah.
Naftaada, shakhsi ahaan, waxay yihiin kuwa hoos u dhacaya. Qaadi kuwa saxda ah, si kastaba ha noqotee, iyo saameynta isbitaallada waxay noqon kartaa mid muuqata.
Tusaale ahaan, haddii aad isbarbardhigto Synephrine budada leh nambin iyo hesperidin, waxaad ku siyaadin kartaa korantada dheef-shiid kiimikaadka. Hadaad kudheesho caffeine sidoo kale, saameyntu waxay noqotaa mid aad u badan.
Marka la eego luminta dhabta ah ee dhabta ah, haddii aad qaadatid afartan takoorid maalin kasta (iyo gaar ahaan ka hor intaadan ka shaqeynin), waxaa macquul ah in aad qaadatid daraasad 0.5 oo dheeraad ah oo ah dufanka lumiska todobaadkii.
Taasi waa ku filan tahay in haddii aad waliba si joogto ah u tababarato oo aad u cuntid mid sax ah.
(Waa inaan sheegaa inaad lumin karto dufanka dufanka-iyo dufanka gaar ahaan-xitaa dhakhso markaad ku darto yohimbine isku dar ah.)
Digniin ku saabsan budada loo yaqaan "Raw Synephrine"
Ka sokow awoodda lagu xakameynayo rabitaanka cuntada, budada 'Synephrine' waxay muujineysaa caddayn eber ah oo awood u leh inay gubto dufanka laftiisa. Sidaa darteed, budada Synephrine looma tixgelin karo inay tahay gubasho dufan. Adoo qaadanaya budada 'Synephrine' oo leh dufan gubid ah inkasta, waxaad dareemi doontaa inaad yareyn doonto inaad wax cunto inta lagu jiro maalintaada maxaa yeelay waad sii buuxsami doontaa muddo dheer waxaadna dooneysaa ku dhowaad eber rabitaan ah inaad wax ka cunto wixii ka baxsan nolol maalmeedkaaga.
Sababtoo ah waa suuq ku suuqsan macnaheedu maaha inaad qaadato inkastoo. Daawada kareemka qaliinka ayaa weli socda, natiijooyinka qaarkoodna waxay muujinayaan in markii la cunay, ay yeelan karto saameyno cillado ah, sida madax xanuun, lallabo, iyo dareenka caloosha. Cuntada sidoo kale waxay ka digaysaa in budada loo yaqaan 'powdered powder' loo yaqaan 'kicin', kuwa leh ama khatar ugu jira cadaadiska dhiig karka, waxay leeyihiin taariikh qoyseedka wadnaha wadnaha ama xitaa istaroog ku dhacay, waa inaad iska ilaalisaa qaadashada alaabtan waxa suurtogal ah in ay horseedi karto kororka khatarta ah sababta oo ah waxay kordhinaysaa heerka wadnaha garaaca.
Sidaas, su'aasha ugu muhiimsan, waa inaad qaadataa Syneprhine? Si daacad ah, haddii aadan u isticmaalin si loo daaweeyo faafin maqaarka fungal ah, wax aanan arkeynin sababta ay tahay in midkeenu u isticmaalo dhamaystirka dheeriga ah. Haddii aanad kugula talin dhakhtarkaaga si aad u qaadato synpehrine, si fudud uga fogow maaddaama khatarta aadka u sareysa ay tixgelinayso abaalmarinta suurtagalka ah ee ku siin karta. Inkasta oo aanan kuu sheegi karin waxa aad u baahan tahay oo aanad qaadan, waxaan si xoogan u aaminsanahay in adoo isticmaalaya alaabtan marka aan laguu sheegin, sidoo kale, waxaad ugu dambeyntii kuugu dhammayn kartaa jirkaaga waxyeelo ka badan ta wanaagsan.
Haddii aad si qunyar ah uga jawaabto internetka, waxaad heli doontaa digniino adag oo ah in budada Synephrine ay kordhin karaan khatarta dhiig kar, suuxdin, wadno xanuun, istaroogga, iyo 'waxyeelo kale oo daran.'
Hagaag, dhowr daraasadood ayaa muujiyay in budada Synephrine aysan kicin cadaadiska dhiigga, baadhitaankana waxa uu muujinayaa in guud ahaanba ay tahay mid ammaan ah oo si fiican u dulqaatay.
Xaqiiqdu waxay tahay haddii aad u egtahay dadka badankood, ma ogaan doontid wax badan markaad qaadanayso budada Synephrine Badankood waxay soo sheegaan koror yar oo tamar ah iyada oo aan midkoodna hoos u dhac guud ahaan lala xiriirin kicinta (jitters, lallabo, wadna garaac deg deg ah, iwm.) ).
Taasi waxay tidhi, haddii aad qabto xaalad caafimaad ama qaadato wax daawo ah oo laga yaabo inay ka hor istaagto ka-qaadista farmashiyaha "Synephrine", la tasho dhakhtarkaaga intaadan isticmaalin, dabcan. Tusaalayaasha waa cadaadis dhiig oo sarreeya, kuwa niyadjabsan, iyo HIV / AIDS.
Daawada budada ah, ama sida ay u badan tahay ogyahay, Bitter Orange, waa warshad caleenta ah oo caleen, khudradda miro iyo khudradda miraha laga goosto oo loo isticmaalo in lagu sameeyo dawada iyo feerka laftiisa loo isticmaalo saliid. Saliida orantada qadhaadh ayaa laga yaabaa in lagu daboolo maqaarka si looga caawiyo daweynta infekshannada, sida lugaha iyo kubbadaha cagta.
Inkastoo daraasado badan oo wali la sameynayo, haddana waxaa jira caddayn ku filan oo muujinaya in marka qof uu ku dhaco qadar ku filan oo liinta leh, wuxuu leeyahay awood u leh inuu xakameyo cunto xumo. Tani waa meesha budada sarrifka ah ay muujiyaan calaamadaha miisaanka luminta dadka isticmaala maaddaama ay si fudud u abuureyso saameyn joogto ah oo ku timaadda jidhka si uu macaamilka u dareemo in uu si buuxda u dareemayo muddo dheer iyo in uu yareeyo dareenka jahawareerka ama rabitaanka inuu cuno cunto dheeraad ah. Adigoo cunaya cunto yaryar, waxaad isticmaashaa kalooriyaal yar, taas oo markaa, waxay keeneysaa miisaan lumis muddo wakhti ah.
Synephrine Root Powder
Suuq-geynta Soodhawrka ee Soodhada ah
Sida loo iibsado saabuunta Synephrine ee AASraw